Doorashadii ugu horeysay oo hal qof iyo hal cod ah oo ka bilaabmatay Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDoorashadii ugu horeysay oo hal qof iyo hal cod ah oo ka bilaabmatay Puntland
Doorashadii ugu horeysay oo hal qof iyo hal cod ah oo ka bilaabmatay Puntland
October 25, 2021 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Haweenay ilmo xambaarsan oo ka codeynaysa degmada Qardho. [Isha Sawirka: Bulshaawi]
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashada hordhaca ah ee dowladdaha hoose ee Puntland ayaa maanta oo Isniin ah ka bilaabmay saddexda degmo ee Qardho, Eyl iyo Ufeyn.
Doorashada oo ah tii ugu horeysay abid ee hal qof iyo hal cod oo ka dhacda Puntland ayaa waxaa ku tartamaya ilaa sideed urur siyaasadeed.
Doorashada degmooyinka kale ee Puntland ayaa ku xigi doona, sida u qorshaysan Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC).
Ku dhawaad 40,000 oo qof oo saddexdaas degmo kunool ayaa maanta codkooda dhiibanaya si ay u doortaan golayaasha deegaankooda.
October 26, 2021 TPEC oo ku dhawaaqday natiijada doorashada goleyaasha deegaanka ee Qardho, Eyl iyo Ufeyn
Qaramada Midoobay oo sheegtay in ka badan 7,250 qof si khasab ah looga barakiciyay Laascaanood
A Turkish military training camp is set to open in the Somali capital Mogadishu next month, the Somali defense minister said Thursday. Abdirashid Abdullahi Mohamed said in a statement that the camp which had been [...]